Madaxweyne Erdogan Oo Si Adag Uga Hadlay Sharciga Ka Dhanka Ah Islaamka Oo Faransiisku Meelmariyay – Great Banaadir
Madaxweynaha Turkey Reseeb (Recep) Tayyip Erdogan ayaa Arbacadii Sharci Cusub oo Faransiiska qorsheeyey in looga hortago wax loogu yeeray “Gooni u goosashada Islaamiga ah”, kaasi oo uu ugu yeeray Gowraca Dimqoraadiyadda.
Sharcigan qabyada ah ayaa waxaa aad looga cambaareeyey Gudaha iyo Dibedda Faransiiska, ayada oo loogu yeeray mid lagu liidayo Muslimiinta, islamarkaana siinaya Dowladda Quwado Cusub oo ay ku xadiddo Hadallada iyo Kooxaha Diimeed.
“Anisixinta Sharciga, oo si furan uga hor-imanaya Xuquuqda Aadanaha, Xoriyadda Diinta iyo Qayimka Yurub, wuxuu noqon doonaa Gowrac lagu sameeyey Dimoqraadiyadda Faransiiska,” ayuu yiri Erdogan oo Khudbad ka jeediyey Ankara.
“Sharciga Cusub waxa uu kaliya u adeegi doonaa Qadiyadaha Xagjirnimada, wuxuuna Cadaadis saari doona Ururada aan Dowliga ah, kuna qasbi doonaa Dhallinyarada inay kala doortaan Diimahooda iyo Waxbarashadooda,” ayuu yiri Erdogan.
“Waxaan ugu baaqeynaa Mas’uuliyiinta Faransiiska, si gaar ah Madaxweynaha Makroon (Macron) inay u dhaqmaan si xakmad leh. Waxaan rajeyneynaa in si deg-deg ah looga laabto Sharciga.”
Erdogan ayaa sidoo kale sheegay inuu diyaar u yahay inuu Faransiiska kala shaqeeyo Arrimaha Amniga iyo Is-dhexgalka, hase yeeshee Xiriirka Labada Dal ayaa dhowaanahan xumaa.
Dowladda Faransiiska ayaa ku guda jirta hanaan ay ku ansixineyso Sharci wax looga qabanayo wax ay ugu yeertay “Gooni u goosad Islaami ah,” kaasi oo Dowladda siinaya awoodo dheeri ah oo ay ku baarto kuna burburiso Ururada Diimeed ee loo arko inay halis ku yihiin Qaranka.
Erdogan ayaa tallaabooyinka lasoo jeediyay ugu yeeray “Muslim diid.”
Bishii OktoOber ee 2020, Erdogan ayaa Su’aal ka keenay “Caafimaadka maskaxeed” ee Makroon (Macron), isaga oo ku eedeeyey inuu qaaday “Olole Naceyb ah” oo ka dhan ah Islaamka, kadib markii Madaxweynaha Faransiiska uu difaacay “Xuquuqda” Farshaxamiistayaasha ay ku daabici karaan Sawirro lagu matalayo Nebi Muxammed NNKH.